Emailvision wuxuu kusii soconayaa SmartFOCUS | Martech Zone
Emailvision wuxuu kusii soconayaa SmartFOCUS
Thursday, April 14, 2011 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Sanado ka hor, waxaan ka shaqeeyay shirkad weyn oo la yiraahdo ASTECH InterMedia gudaha Denver, Colorado. Shirkaddu waxay ahayd shirkadda ugu horreysa ee suuq geynta keydka macluumaadka ee warshadaha wargeysyada oo ay maamusho qof weyn (iyo saaxiibkiis) Tom Ratkovich. Waqtigii hore markii tera aysan ku jirin eraybixinta, waxaan naqshadeynay oo dhiseyna bakhaarro badan oo terabyte ah oo lagu kaydiyo xogta qaar ka mid ah wargeysyada ugu waaweyn adduunka.
Waxay ahayd waqti layaableh waxayna ii horseedday u guuritaankayga Indianapolis si aan u qaabeeyo, u horumariyo una hirgeliyo teknoolojiyadda suuq geynta keydka wargeysyada gobolka. Waxaan ka isticmaali jirnay aaladda loo yaqaan SmartFOCUS Viper ee wargeyska, iyadoo loo marayo shirkad Salaan. Iskaashi, Bruce Taylor oo ka tirsan Praesage wuxuu ku dhisay guriyeyn iyo qalab raadinta oo ka maqnaa dunidan… oo hormarey ilaa maantadan.
Qalabyada qalabku aad ayey u horumarsanaayeen waxaan la xiriiray Tom oo aan uga warramay iyaga them wax yar ma ogeyn waxa xiga ee dhici doona! Shirkadda Tom waxay qaadatay aaladaha Praesage waxayna u howlgalisay SmartFOCUS macaamiisheeda. ASTECH InterMedia waxaa markaa iibsaday SmartFOCUS - horumar weyn oo loogu talagalay warshadaha Mareykanka.
Sannado ka dib, iyada oo loo marayo xiriirka qaar ka mid ah xirfadlayaasha warshadaha, shirkadeennu waxay la shaqeysay Emailvision. Emailvision waa a bixiyaha adeegga iimaylka adduunka yaa balaadhinaya waa raadkiisa sifiican oo dhaafsiisan emaylka iyo moobiilka. Dhawaan way iibsadeen Ujeeddada Suuqa si loogu quusto warshadaha warbaahinta bulshada iyadoo la adeegsanayo madbacad bulsho oo weyn iyo cabbiraad.
Hadda, Emailvision wuxuu iibsanayaa SmartFOCUS. Tani waa isku dhafan! SmartFOCUS ayaa ugu horreyntii ahayd macaamil / adeegsi rakibay macmiil laakiin dhowaan wuxuu ku dhawaaqay barnaamij Software ah oo ah nooc Adeeg ah. Markaan waayo-aragnimadooda hore la soo kulmay, waxaan kuu sheegi karaa in mar haddii adeegsadayaashani ay ku dhacaan suuqa SaaS, ay tahay wax beddelashada ciyaarta ee warshadaha. SmartFOCUS waxay adeegsatay jiidista iyo hoos u dhigista qaab-dhismeedka weydiinta qaab-dhismeedka Venn taas oo ka dhigtay suuqgeynta keydka keydka xogta heer sare si aad u fudud. Marka lagu daro meelaha la xisaabiyey, barxada ayaa ugu fiicneyd warshadaha, iyo keydka macluumaadka lahaanshuhu wuu ka dhaqso badnaa xog kasta oo xiriir ah oo aan waligay isticmaalay.
Emailvision wuxuu hadda leeyahay xiriir qoto dheer aduunka oo dhan iyo warshadaha suuq geynta sare. Waxay horey uheysteen suuq geyn email iyo suuq geynta mobilada oo loogu talagalay in lagu isticmaalo e-commerce mer isku-darradan iyo soo iibsashadu waxay siin doonaan tikniyoolajiyadda iyo dadka ilaha dhaqaale ee ka dhigi kara iyaga aaladda casriga ah ee ugu casrisan adduunka
Waa kan fiidiyowgii ugu dambeeyay ee ka socda kooxda 'Emailvision', oo aad u wanaagsan in la arko iyagoo wali baashaalaya!
Waa adduun weyn, laakiin waa yaab intee in le'eg oo xiriir ah oo aan leeyahay oo sii wada inay dib uga soo cusboonaadaan xirfadeyda. Waxaan rajeynayaa inaan sii wado la shaqeynta dhammaan shirkadahaan iyo dadka ganaaxa!
Post weyn Doug. Waan ku faraxsanahay inaad sidoo kale jeclaatay fiidiyowga - filo mustaqbalka inbadan. 🙂